शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १५ वैशाख २०७६)
गत आवमा १७ दशमलव ७० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको कम्पनीले चैत मसान्तसम्ममा रू. ३१ करोड ९ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३१ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले रू. २३ करोड ७२ लाख नाफा कमाएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको सञ्चालन नाफा र खुद ब्याज आम्दानी बढेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ६२ करोड रहेको कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. ६४ करोड २३ लाख छुट्याएको छ ।
पूँजीवृद्धिका लागि यस कम्पनीले पूर्णिमा विकास बैंकलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ । २०७५ फागुन २६ गते प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ । बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिमा १७ हजार ३ सय ३० कित्ता शेयर खरीद गर्ने र ६ हजार ९ सय ३६ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
2019-04-28 - 63 view(s) - abhiyan